Home Wararka Sidee ku noqon kartaa Kheyre oo kale?
Qormadan kooban waxay bilow u tahay qormooyin taxane ah, oo aan kaga hadli doono madaxyaweynta siyaasadda (political elites), dhaqankooda iyo sida loo jili karo. Qaybtan koowaad, waxaan ku soo qaadan doonaa Hassan Ali Kheyre iyo sida loo koobiyeen karo siyaasaddiisa igu sawirta iyo indhasarcaadka. Caadiyan, way sahlan tahay in aad noqoto Kheyre oo kale balse waxaad u baahan tahay in aad raacdo tallaabooyinkan soo socda:
1. Daacad u noqo qofka madaxda kuu ah. Marnaba yeesan kaa hoos bixin in aad khudbadahaaga ku bilowdo “aniga oo ku hadlaya afkayga iyo kan madaxweynaha…”. Ku celceli magaciisa. Meel kasta ka sheeg.
2. In aad Kheyre noqoto macnaheedu waa in aad iska dhaadhicisaa in aad leedahay shacbiyad dadweyne. Sidaas darteed, sameyso dhallinyaro badan oo kaala shaqeysa sidii aad ku yeelan karto taageero shacab. Ha u daymo la’aan ciyaal Facebook, Twitter, Tiktok iyo Youtube.
3. Waxqabadkaaga sawir ku soo muuji. Ha dhayalsan igu sawirta. Wax kasta sawir, xitaa sawirka laftirkiisa sawir si ay uga mid noqoto waxqabadka dowladdaada.
4. Iska indhatir xaqiiq kasta oo ka jirta dalka, taas oo liddi ku ah rabitaankaaga. Iyada oo sagaashanka la maraayo oo firimbiga afka lagu haayo waxaad iska dhahdaa “sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal.” Maskaxda ku haay halhayska ah cidna nama cabsi gelin karto.
5. Askarta la joog, lana saaxiib. Ka dhaadhici in dalkan uu leeyahay laba cadow oo keli ah: Qabiil iyo Mucaarad qaran-dumis ah.
6. Iska dhig hoggaamiye cirka ka soo dhacay! Markasta oo aad shacabka la hadlayso adeegso halhayska “waa markii ugu horreysay…”.
7. Inta aad kari karto iska dhig qof aan qabyaalad wax ka aqoon. Si aad taas u muujiso meel fagaare ah ka sheeg in aad ku adkeysay reerkaaga.
8. Sharciga jebi, wax ka beddel haddii aad rabto. Ha u dulqaadan hay’ad kasta oo caqabad ku ah rabitaankaaga! Wax kasta xafiiskaaga ha ka bilowdaan, hana ku dhammaadaan. Yaa u baahan Baarlamaan iyo Garsoor madaxbannaan? Wax kasta adigaa qaban kara. Ha hilmaamin in aad tahay hoggaamiye shacab.
9. Marnaba niyaddaada ha ka saarin in aad wax khiyaanto. Ciddii aad fahmi weyso laba iyo eber dir ama cagta mari iyaga dhan. Ha hilmaamin dardaarankii Niccolò Machiavelli ee ahaa in lagu jeclaado waxaa ka amni badan in lagaa cabsado.
10. Albaabka ka xiro warbaahinta madaxbannaan iyo mucaaradka. Ciddii iyaga ka mid ah oo ku fahmi weyso qaran-dumis iska dheh. Haddii ay macquul kula noqotana kireyso qaar iyaga ka mid ah, si dadban u yeelo (co-option strategy), afkana u buuxi.
11. CBB badan sameyso. U sheeg in aad tahay astaan qaran oo lamataabtaan ah.
12. Siyaasadda waaweynka (big men politics) ku dhaqan. Ha u dulqaadan cid aan adiga ahayn in ay wax ka goyso siyaasadda dalka.
Laba iyo tobankaas astaamood waxaa la heli karaa siyaasiyiin badan oo la wadaagta Kheyre, waxaa ka mid ah AA Warsame iyo Thabit oo labaduba ay ku jirto naf u ciil qabta igu sawir, Facebook iyo isla qab weynaan.